Hake nge-paprika, isitya esilula nesilula sokwenza. | Ukupheka kweKhitshi
UMontse Morote | | Ukupheka kweentlanzi
Hake nge-paprika, isitya esilula sokukhanya kunye neentlanzi ezilungileyo kakhulu.
Hake nepaprika yinto yakudala ekhitshini lethu. Iresiphi elula kakhulu yokulungiselela enokwenziwa nezinye iintlanzi. Le recipe ihlala ilungiswe ngokwahlukeneyo kwizithako kwaye bayigqiba yonke kunye nerehash. Ndilungisa yonke into kwi-casserole efanayo, ephekiweyo kwaye yonke into ishiya isosi etyebileyo kunye nencasa.
Isitya esikhulu seentlanzi esilungisiweyo esinezithako ezimbalwa kwaye sigcwele incasa, apho kubalulekile ukuba i-hake ikumgangatho olungileyo. Kuya kufuneka ulumke ungagqithi kwihake, yonke into iya kuxhomekeka kubukhulu bezilayi.
I-hake ye-1 isikiwe
Iigloves ezi-4 zegalikhi
I-paprika eswiti okanye isinongo esincinci, inokuxutywa
Ioyile kunye netyuwa
Ukulungiselela i-hake nge-paprika, siza kuqala sicobeke kwaye sisike igalikhi ibe ngamacwecwe amancinci.
Emva koko siyaxobula kwaye sisike iitapile zibe ngamacwecwe amancinci.
Ityuwa izilayi ze-hake.
Sibeka i-casserole okanye ipani yokupanda, songeza i-jet elungileyo yeoyile kubushushu obuphakathi, songeza igalikhi egoliweyo.
Xa beqala ukuthatha umbala sidibanisa itispuni leepaprika esimnandi, siyivuselela kwangoko.
Nje ukuba sivuselele i-paprika ngegalikhi kunye neoyile, yongeza iglasi yamanzi kwaye ungeze iitapile zinqunqwe zangamacetyana amancinci. Vala kwaye upheke imizuzu eli-10.
Tyhila i-casserole, prick iitapile, ukuba ziphantse zenziwe, beka izilayi ze-hake ngaphezulu. Sibeka intwana yesosi ngaphezulu kwentlanzi, sigubungele kwaye siyeke iintlanzi zipheke imizuzu emi-5-8, kuxhomekeke kwindlela oyithandayo ngayo.
Xa eli xesha lidlulile sivula i-casserole, ukuba iintlanzi zilungile siyacima. Makuphumle imizuzu embalwa.
Khupha, ukhonze kwisitya kwaye ufefe ipaprika encinci eswiti okanye eqholiweyo phezu kwentlanzi kunye nentwana yesosi.
Kwaye iya kuba ilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kweentlanzi » Hake nepaprika
Cookies Oatmeal ngamaapile kunye nembewu
Iitapile ezicujiweyo ezinerosemary kunye nelamuni